Manao Fotoam-pivavahana Iraisam-pinoana ve ny Vavolombelon’i Jehovah?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Basque Batak (Toba) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chol Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Féroïen Galicienne Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Javaney Karen (S'gaw) Kikamba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwanyama Kyangonde Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Nzema Oromo Ourdou Ouzbek Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tojolabal Tongan Tseky Twi Télougou Valencienne Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Éwé
Tia miresaka ny zavatra inoanay amin’ny olona avy amin’ny fivavahana rehetra izahay Vavolombelon’i Jehovah. Tsy manao fotoam-pivavahana iraisam-pinoana anefa izahay, izany hoe tsy miara-mivavaka amin’ny fivavahana hafa. Milaza ny Baiboly fa “tafakambana mirindra tsara” ny tena Kristianina. Tsy ho tanteraka anefa izany, raha tsy mitovy ny zavatra inoan’izy ireo. (Efesianina 4:16; 1 Korintianina 1:10; Filipianina 2:2) Tokony hanaiky ny tena Kristianina fa tena ilaina ny toetra toy ny fitiavana, mahay mangoraka, ary mahay mamela heloka. Tsy ampy anefa izany fa tokony hiorina amin’ny fahalalana marina tsara avy ao amin’ny Baiboly koa ny zavatra inoan’izy ireo, raha tsy izany ilay izy tsy hisy dikany. Miorina amin’ny fahalalana marina tsara avy ao amin’ny Baiboly àry ny zavatra inoanay.—Romanina 10:2, 3.
Milaza ny Baiboly fa tsy tokony hiara-hivavaka amin’ny fivavahana tsy mitovy finoana aminy ny Kristianina. Lasa toy ny miray zioga mantsy izy ireo amin’izay, nefa tsy mifandanja mihitsy. Mety hanimba ny finoan’ny tena Kristianina izany. (2 Korintianina 6:14-17) Tsy navelan’i Jesosy nifangaroharo tamin’ny fivavahana hafa àry ny mpianany. (Matio 12:30; Jaona 14:6) Tsy nahazo niara-nivavaka tamin’ireo firenena manodidina koa ny Israelita, araka ny lalàn’i Mosesy. (Eksodosy 34:11-14) Tsy nanaiky hampian’ireo olona tsy nitovy finoana taminy koa ireo Israelita tsy nivadika, tatỳ aoriana. Mety ho nahatonga azy ireo hiara-hivavaka tamin’ireo olona ireo mantsy izany.—Ezra 4:1-3.
Miresaka ny zavatra inoany amin’ireo olona tsy mitovy finoana aminy ve ny Vavolombelon’i Jehovah?
Eny. Nandany 2 046 000 202 ora, ohatra, izahay, tamin’ny 2017, mba hiresahana ny zavatra inoanay tamin’ny hafa. Te hahafantatra ny hevitry ny olona sy ny zavatra inoany izahay rehefa mitory, hoatran’ny nataon’ny apostoly Paoly. (1 Korintianina 9:19-22) Milaza ny Baiboly hoe tena ilaina ny ‘manaja lalina’ an’izay olona hiresahanao. Miezaka mampihatra an’izany izahay, rehefa miresaka ny zavatra inoanay amin’ny hafa.—1 Petera 3:15.
Tokony hanao izay hisian’ny firaisan-tsaina ve ny fivavahana na inona na inona ampandeferina? Jereo ato izay lazain’ny Baiboly momba an’izany.